သီဟသစ် ရဲ့ အားမာန်သစ်: 2009
Posted by သီဟသစ် at 12:29 AM 54 comments:
ချစ်သူသိလား ရှေးရေစက်တွေ ဘယ်သူဖျက်ဖျက် မပျက်နိုင်ပေ - အပိုင်း (၅)
ရဲထွဋ်တစ်ယောက်ကတော့ စင်္ကာပူကို ရောက်တာ နည်းနည်းကြာလာပြီ ဖြစ်၍ နေသားကျ နေပြီဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်မိတိုင်း ပြာပြာ့ကို သတိရသော်လည်း စိတ်နာနာနဲ့ ချစ်နေမိတယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး အတိုင်း ဖြစ်နေသည်။ “တစ်ခါ အခွန်ဆောင်ဖူး သံရုံးအကြောင်း နားလည်”၊ “ကောမန့်(သို့)စီဘောက်စ် မှန်ဖူးတဲ့ ဘလော့ဂါ” စတဲ့ စကားပုံ များလိုပဲ အချစ်ကို ကြောက်နေလေပြီ။ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် ခရီးသွားရင်း Seattle မှာ ရောက်နေပြီ ဖြစ်သော ဘိုဘို့ ဆီ ဝင်လည်ဖြစ်တော့ ဘိုဘိုက ဒဏ်ရာဟောင်းတွေ တူးဖော်လိုက်သေးသည်။
ပြာပြာတစ်ယောက် စင်္ကာပူ သွားသောအခါ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေမှာ စိုးသဖြင့် ဦစိုင်းစိုင်း၏ တူဖြစ်သူ စင်္ကာပူကနေ ခဏပြန်လာသော ဏီကင်း နှင့် တူတူ သွားခိုင်းလိုက်သည်။ လေယျာဉ်ပေါ်တွင် လေယျာဉ်မယ်လေးများ ဖြစ်သော ကောင်းကင်ရဲ့ သမီးပျို၊ ဒဏ္ဍာရီ၊ နှင်းနှင့်မာယာ တို့ကို မြင်ရသော အခါ ဏီကင်းရဲ့ စိတ်တို့ လေဟုန်ကိုဆန် အဝေးဆုံးကို ပျံသွားပြီမို့ သူ့အစ်မ ပြာပြာကို ဂရုစိုက်ဖို့ သတိမရပြီ။ပြာပြာ စင်္ကာပူ စရောက်ရောက်ချင်း အိမ်ကို လွမ်းနေသော ဂျူနီယာလွင်ဦး၊ ပျော်ပျော်နေချင်တဲ့ မေခရမ်း ၊ မှားတတ်ပါတယ်လေ ဆိုတဲ့ မမီး တို့နှင့် အတူတူ နေဖြစ်သည်။
ကျောင်းမှာတုန်းက အငယ်တန်းက ကောင်မလေးဖြစ်သော နွေးနွေးသဲမွန်၏ မင်္ဂလာဆောင်တွင်ကား ကျောင်းက သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေ တော်တော်များများ ပြန်ဆုံကြခါ Gathering ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလေသည်။ အငယ်တန်းက သူတွေထဲမှာ ရဲထွဋ်နှင့် တစ်ရုံးတည်းမှာ အတူတူလုပ်နေသော မြ (ခေါ်) မြရေလျဉ်၊ နောက်တီးနောက်တောက် စည်သူ၊ မွန်လေး တလနွန်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းသားလေး ညီညီ တို့လည်း ပါလေသည်။ သူငယ်ချင်းများက ရဲထွဋ် နှင့် ပြာပြာတို့ကို စနောက်ချင် သော်လည်း သူတို့ ၂ ယောက်က ရုပ်တည်တွေ နေနေကြသဖြင့် အချင်းချင်းပဲ ကြိတ်ပြော နေကြရလေသည်။ အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ mail address တွေ တစ်နေရာမှာ စုရေးဖြစ်သဖြင့် အားလုံးမှာ contact တွေတော့ ရသွားကြလေပြီ။
ပြာပြာက အနည်းငယ် သွက်သည် ထင်သော မြကို သိပ်ကြည့်မရပေ။ သူ့ဘာသာသူ သွက်တာ ဆိုရင် ပြာပြာနဲ့ မဆိုင်သော်လည်း ရဲထွဋ်ဘေးမှာ သွက်နေသောကြောင့် မျက်စိထောင့်နေခြင်းဖြစ်၏။ “ပို့စ်ကမလှုပ် ကောမန့်ကလှုပ် ” ဟုထင်သည်။ မြကလည်း ရိပ်မိသည်။ တစ်နေ့ MRT ပေါ်တွင် ပြာပြာနှင့် မြ ဆုံကြသော အခါ မြက
“ဒီမယ်၊ မမပြာ၊ နောက်ဆုတ်လိုက်ပါ”
“ဟေ့၊ နောက်မဆုတ်နိုင်ဘူး၊ ရဲထွဋ်က ငါ့အချစ်ဦး”
ပြာပြာက အနိုင်မခံချင်သော ညာဉ်ဖြင့် ပြန်ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။
“သမီးပြောတာ အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ ဒီမယ် လူတွေကျပ်နေလို့ ရှေ့တို့းမရရင် တံခါးညပ်တော့မယ်။ နောက်ကို နည်းနည်းဆုတ်ခိုင်းတာ”
ပြာပြာ နည်းနည်းရှက်သွား၏။ နောက်တစ်ဘူတာအရောက် မြကို မျက်စောင်းထိုးပြီး ဆင်းသွားသည်။
မြက ရဲထွဋ်ဆီကို ဖုန်းဆက်၍ အလုပ်ကိစ္စ အကြောင်း၊ သွားစရာ နေရာတွေ အကြောင်းမေးလေ့ရှိသည်။ တစ်နေ့သောအခါ မြက ရဲထွဋ်ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး
“ကိုရဲ၊ သမီး တိုပါးရိုး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မသွားတတ်လို့ အဲဒါလိုက်ပို့ပေးအုံး”
“ဟေ၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဘာသွားလုပ်မှာလဲ”
“အဲဒီမှာ ကပ္ပိယ လုပ်နေတဲ့ သမီးဘကြီး ဦးလစ်ဘရာထွန်း နဲ့ သွားတွေ့မလို့”
“အေးအေး ဒါနဲ့ Sentosa တို့၊ Palau Ubin တို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သွားတတ်တယ်မို့လား”
“ဟုတ်၊ အဲဒါက သွားရတာ လွယ်တယ်လေ၊ လူတွေအများကြီးနောက် လိုက်သွားရုံပဲ”
“အေး အဲအတိုင်းပဲ သွားလိုက်၊ တိုးပါးရိုး ဘူတာကို သွား၊ မြန်မာစကားသံတွေ အများကြီး ကြားရတဲ့နောက်လိုက်၊ တွေ့လိမ့်မယ်၊ ငါမအားလို့ လိုက်မပို့တော့ဘူး”
စည်သူကလည်း ပြာပြာ့ဆီကို ဖုန်းတွေဆက်လေ့ရှိသည်။ တကယ်က စည်သူဆိုတာကလည်း ကျောင်းတုန်းက ပြာပြာကို အခါခါ ငေးခဲ့ဖူးသော သူများထဲတွင် ပါဝင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ဟေ့ ဆိုကတည်းက ရဲထွဋ်နှင့် ရည်းစားဖြစ်သွားသဖြင့် လက်လျှော့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တစ်ရက်တွင်တော့ စည်သူက မွေးနေ့ အကြောင်းပြပြီး ထမင်းကျွေးဖိတ်သဖြင့် ပြာပြာနှင့် စည်သူတို့ ပင်နစူလာပလာဇာရှိ ရနံ့သစ် ထမင်းဆိုင်သို့ သွားကြသည်။ ဆိုင်ထဲ အရောက် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တွေ့ရတာက ရဲထွဋ်နှင့် မြတို့ ဖြစ်နေသည်။ မြ နှင့် ပြာပြာတို့ ဟင်းသွားမှာနေခိုက် ရဲထွဋ် တစ်ယောက် စည်သူ့နားသွားပြီး
“ဟေ့ကောင် စည်သူ၊ ပြာပြာ့ကို မင်းတွဲခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးတွေလို သွားမလှည့်စားပါနဲ့၊ သူက အဲလိုမဟုတ်ဘူး”
“ဗျာ အဲဒါ ခင်ဗျားကိစ္စ လားဗျ”
“ပြာပြာနဲ့ ငါရဲ့ ကျောင်းတုန်းက ဇာတ်လမ်းရှိတာ မင်းမသိဘူးလား”
“တစ်ကျောင်းလုံး သိသားပဲ၊ အတိတ်က အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီပဲဗျ၊ စိတ်လျှော့လိုက်တော့”
ဟင်းမှာရာက ပြန်လာသော ပြာပြာ နှင့် ရဲထွဋ်တို့ မျက်လုံးချင်း ဆုံကြသော အခါ နာကြည်း ကြေကွဲသော အကြည့်များဖြင့် အပြန်အလှန်ကြည့်ကြပြီး မကြည်ပြုံးများ ပြုံးပြကြသည်။ (ဒီနေရာတွင် သူတို့မည်သို့ သရုပ်ဆောင်မည်ကို သီဟသစ် မသိချေ :P )
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ Gtalk ပေါ်မှာ တွေ့ကြသောအခါတွင်ကား အခါတွင်ကား ပြာပြာနဲ့ ရဲထွဋ်တို့ ပေါက်ကွဲကြလေပြီ။
“ဟွန်း အလုပ်သွားတယ် ဆိုပြီး ကောင်မလေးတွေနဲ့ လျှောက်သွားနေတာ နေမှာ”
“ဟ၊ ငါတို့က Client Site ကို ကိစ္စ ရှိလို့ သွားတာ၊ အပြန် ညစာစားချိန်မို့ City Hall မှာ ထမင်းဝင်စားတာ၊ မင်းကရော ဘာကိစ္စ စည်သူနဲ့ အတူရှိနေရတာလဲ”
“သူ့မွေးနေ့ မို့လို့ ကျွေးချင်တယ် ဆိုလို့ လိုက်ကျွေးတာ၊ နေပါအုံး ကျွန်မကို ရှင်းပြနေရအောင် ရှင့်ကို ဘယ်သူမေးနေလို့လဲ”
“မင်းက ငါ့ကို မေးတာကိုး၊ မင်းကရော ဘာလို့ ရှင်းပြနေတာတုန်း”
“ရှင်ကရော ဘာလို့မေးတုန်း၊ ရှင်နဲ့ ကျွန်မ က ဘာတွေလဲ”
နှစ်ယောက်သား အပြိုင်အဆိုင် Invisible Mode သို့ ပြောင်းပြီး နေနေကြသည်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကြည့်လည်းကြည့်မရ သို့သော် တွေ့လည်းတွေ့ချင် သောကြောင့် Block လုပ်မပစ်ကြချေ။ ဒီကြားထဲ သူငယ်ချင်း သီဟသစ် ရဲ့ Gtalk Status က စာသား “The more you hate, the more you love” ကိုတွေ့ကြရသောကြောင့် မဲ့ပြုံးပြကြရသေးသည်။
နှစ်ယောက်သား ချစ်ခဲ့ဖူးကြသော်လည်း စိတ်နာနာဖြင့် ခွဲခဲ့ကြသော ချစ်သူ ၂ ယောက်အဖို့ ပြန်ပေါင်းထုပ်ရန် ကိစ္စမှာ ထင်သလောက် မလွယ်ချေ။ ရဲထွဋ်တစ်ယောက် မြရဲ့ နှောင်ဖွဲ့မှုက ရုန်းထွက် နိုင်မှာလား၊ ပြာပြာတစ်ယောက်ကရော စည်သူရဲ့ ဗျူဟာတွေထဲနေ လွတ်မြောက်နိုင်မှာလား ဆိုတာတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ သိကြပါလိမ့်မည်။
P.S နောက်တစ်ပိုင်းဆိုရင် ဇာတ်သိမ်းမည် စိတ်ကူးထားပါသည်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အားလုံးကို နာမည်တွေ သုံးခွင့်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by သီဟသစ် at 11:58 PM 34 comments:
ချစ်သူသိလား ရှေးရေစက်တွေ ဘယ်သူဖျက်ဖျက် မပျက်နိုင်ပေ အပိုင်း (၃)
ကျောင်းမှာ ရဲထွဋ်တို့ အဖွဲ့ ထိုင်လေ့ရှိသော လှေခါးအဆင်းလေးနားမှာ ပြာနှင့်ရဲထွဋ်တို့ နှစ်ယောက်သား စကားတွတ်ထိုးနေကြလေသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာတော့ သီဟသစ်၊ ဖိုးသင်္ကြန်၊ ရေတမာ၊ တောင်ပေါ်သား တို့လေးယောက်သား ဟောင်ကောင်ရှိုး ဆော့နေကြသည်။ ရေတမာနှင့် တောင်ပေါ်သားက ခုနှစ်မှ မန္တလေး ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်ကို စတက်တာ ဖြစ်သော်လည်း ဖဲရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ တစ်ဖက်ကမ်းခတ်လေသည်။ ဟိုဘက်က တစ်အုပ်ကတော့ မျက်မှန်လေး၊ နွေးနေခြည် နှင့် မေကဆုန် တို့က ပညာရပ်အကြောင်း ဆွေးနွေးနေကြသည်။ မျက်မှန်လေးက online မှာ ချစ်သူရှာနိုင်တဲ့ အကြောင်းဆောင်းပါး မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါလာတာကို ပြောပြနေသည်။ နွေးနေခြည်က ဖဲဝိုင်းဘက် အာရုံရောက်နေသဖြင့် သိပ်မကြားလိုက်ပေ။ မေကဆုန်ကတော့ မျက်မှန်လေး စကားကို စိတ်ဝင်စားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အချဉ်ပေါင်းကို ဆက်စားနေသည်။
“ပြာ့ဖေဖေပေါ့၊ ပြာ roll no. တွေ တအားကျလို့တဲ့ ပြောနေတာ၊ သူ့ပုံစံအတိုင်း ပညာတတ် ထက်မြက်တဲ့ စီးပွားရေးသမား ဖြစ်စေချင်တာ။ ဟိုနေ့ကတောင် မေးသေးတယ်။ ကျောင်းပြီးရင် ဘာလုပ်မှာလဲတဲ့။ ပြာလဲ မသိဘူးလို့ပဲ ဖြေလိုက်တယ်”
“ကျောင်းစာနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ကိုရှင်းပြပေးမှာပေါ့၊ project တွေ assignment တွေရော ကူလုပ်ပေးမယ်”
စကားပြောနေရင်း ရဲထွဋ်ကို ငေးစိုက်ကြည့်နေသော ပြာတစ်ယောက် ရဲထွဋ် နှုတ်ခမ်းပေါ်က အမာရွတ်သေးသေးလေးကို မြင်သွားသည်။ ရဲထွဋ်က ရှက်ရှက်ဖြင့်
“အဲဒါ ကိုငယ်ငယ်က စက်ဘီးလဲရင် ခိုက်မိတာ”
“အဲဒါလေးက တစ်မျိုးလေး ဆွဲဆောင်မှုရှိသလိုပဲ၊ အသည်းယားစရာ”
ထိုစဉ်ဘိုဘိုတစ်ယောက် ဖဲဝိုင်းနား အရင်ရောက်ပြီး
“ဟေ့ကောင် သီဟ၊ မင်းကို နှင်းဆီဖြူလိုက်ရှာနေတယ်”
“ဟာ အဲဒါမှ ဂွပဲ။ သူဒီနေ့ ကျောင်းမလာတော့ဘူး ဆိုလို့ ငါဖဲလာရိုက်နေတာ။ စိတ်ကောက်လိမ့်အုံးမယ်”
ဆိုပြီး ဝရုန်းသုန်းကား ပြေးထွက်သွားသည်။
“ဟိုမှာဘိုလာနေပြီ၊ သူ့ကောင်မလေးနဲ့ ဒီနေ့ပြတ်ထားတာ၊ သူ့ကို အားပေးစကား သွားပြောလိုက်အုံးမယ်”
ဒါငါစောင့်နေတဲ့ အခွင့်အရေးပဲ၊ ခုဘိုဘို့မှာ ရည်းစားမရှိတော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ရဲထွဋ်တစ်ယောက် စိတ်ဆင်းရဲမှာလည်း ငါမလိုချင်ဘူး၊ သူ့ကို ဖြတ်လိုက်ရင် ကောင်းပါ့မလား
“ဟေ့ဘိုဘို၊ မင်းတအား စိတ်ညစ်နေလား”
“ဟမ်၊ ငါက ဘာကို စိတ်ညစ်ရမှာလဲ။ ငါဖြင့် စိတ်လွတ်လပ်မှုရသွားလို့ ပျော်နေတာ၊ ငါ့စိတ်ကူးယဉ် “နတ်သမီးလေးကို ငါတွေ့ပြီကွ”
“Dream လေ ”
ကန်တင်းထဲမှာ မေလေး၊ မိုးခါး တို့နဲ့ ထိုင်နေသော ပြာပြာတစ်ယောက်ကို ဟိုနှစ်ယောက်က ဗျူးနေကြသည်။
“ကဲပြာပြာ၊ ဘယ်လိုလဲ၊ နင်လိုချင်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာပြီလေ၊ ဘိုတစ်ယောက် ရည်းစားနဲ့ ပြတ်သွားပြီ၊ နင် ဘိုဘို့ကို နင့်ဘက်ပါလာအောင်လုပ်တော့မှာလား”
“ဟေ့၊ ငါ့မှာ ရဲထွဋ်ရှိနေတာ သတိလဲရကြအုံး”
“အဲဒါဆို နင်က ဘိုဘို့ကို ဘယ်လိုဆက်ကြိုးစားမှာလဲ”
“ကဲကဲ၊ နင်တို့ အတန်းတွေရှိတယ်မို့လား၊ သွားကြတော့”
“အေးပါ၊ အတန်းပြီးရင် နင်ပြောပြရမယ်နော်၊ ငါထင်တာ ပြာပြာတစ်ယောက် ရဲထွဋ်ကို တကယ်ချစ်သွားပြီ ထင်တာပဲ”
ကန်တင်းထဲမှာတော့ ပြာပြာ တစ်ယောက်စဉ်းစားခန်းဝင်ရင်း ကျန်ခဲ့သည်။
ငါ့မှာ ဘိုဘို့ကို လှုပ်ရှားဖို့ရာ ဘာလို့ စိတ်သိပ်မပါသလို ဖြစ်နေတာလဲ၊ မေလေးနဲ့ မိုးခါး ပြောသွားတာ မှန်နေပြီလား၊ ငါရဲထွဋ်ကို ချစ်နေပြီလား
“shopping ထွက်မလို့ဟာ ဖေဖေက ပိုက်ဆံထားမသွားဘူးလား မအေးရဲ့”
“ကျွန်မလဲ သေချာမသိဘူး မမလေးရဲ့”
ထိုစဉ် ပြာပြာ့ရဲ့ အဖေ ဦးရှင်ကြီး (ခ) ဦးစိုင်းစိုင်းလားရှိုး ထွက်လာပြီး ပြောလိုက်သည်။
“ဟေ့ ပြာပြာ၊ ငါတမင်သက်သက် မထားထားတာ၊ သမီးကို သင်ခန်းစာပေးချင်လို့ပဲ”
“အဲဒါသင်ခန်းစာ မဟုတ်ဘူး အဖေ၊ သမီးကို ထိန်းချုပ်ချင်လွန်းလို့ အဖေ လုပ်နေတာ”
“ငါလုပ်သင့်လို့လုပ်တာ၊ တစ်တန်းနဲ့ တစ်တန်း သမီးရဲ့ Roll No တွေကျလာတယ်၊ အတန်းလဲ မှန်မှန် မတက်ဘူး ကြားတယ်၊ ညည်းမရှက်ဘူးလား ပြာပြာ၊ ငါလို နာမည်ကြီး စီးပွားရေးသမားရဲ့ သမီးက ဒီလောက်ညံ့ရတာ”
“အဲဒါပဲ၊ အဲဒါပဲ၊ ဖေဖေ ပြောနေတာ၊ ဖေဖေ့အတွက်၊ ဖေဖေ့ ဂုဏ်သိက္ခာ မထိခိုက်ဖို့အတွက်ပဲ၊ အဲဒါကြောင့် သမီးက ဖေဖေ့လို မဖြစ်ချင်တာ၊ တခြားလူတွေက သမီးတို့မိသားစုကို ဘယ်လိုတွေးထင်ကြမယ် ဆိုတာပဲ သိတယ်၊ သမီးတို့ ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတာ မသိဘူး”
“ဖေဖေက သမီးရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် ပြောနေတာ သမီးသိရဲ့လား”
“မဟုတ်ဘူး ဖေဖေ၊ ဖေဖေက ဇွတ်ပုံသွင်းနေတာ၊ မေမေ ဆုံးခဲ့ရတာလည်း ဖေဖေ ခုလို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လို့ နေမှာပဲ”
ဦးစိုင်းစိုင်း တစ်ယောက် ဒေါသမထိန်းနိုင် ဖြစ်မိသွားပြီး
တွေ့နေကျ နေရာလေးတွင် ပြာပြာတစ်ယောက် ငိုရှိုက်နေသဖြင့် ရဲထွဋ်တစ်ယောက်လည်း စိတ်တွေပူပြီး ချော့နေရသည်။
“ဖေဖေ မတရားဘူး ကိုရယ်၊ တအားရက်စက်တယ်”
“ပြာအိမ်မပြန်ချင်တော့ဘူး ကိုရယ်၊ ဖေဖေ့ မျက်နှာကို တွေ့ရမှာ ကြောက်တယ်၊ အဟင့်၊ အဟင့်”
“တိတ်ပါ ပြာရယ်၊ ပြာခုဘာလုပ်ချင်လဲ၊ ဘယ်သွားချင်လဲပြော..”
“ကို.. ပြာတို့ ခိုးပြေးကြရအောင်လေ”
“စိတ်အေးအေးထားပါ ပြာရယ်၊ ပြာ့အဖေကို ပြန်ရှင်းပြလို့ ရတာပဲ”
“ဟင့်အင်း၊ ပြာ မလုပ်ချင်တော့ဘူး”
“ပြာရယ်၊ တို့တွေ ကျောင်းသားပဲ ရှိသေးတယ်လေ၊ ပြာ့ကို ကို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် ဖြစ်စေချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကိုအဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူးလေ။”
“စိတ်ချ၊ ပြာရဲ့ဘေးနားမှာ ကိုအမြဲရှိနေမယ်၊ ဒီလိုလုပ်မယ်လေ၊ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်သွားအောင် တို့စစ်ကိုင်းဘက်ကို သွားလည်မယ်လေ”
Credits to http://www.flickr.com/photos/mgmoeswe/277100027/sizes/o/
စစ်ကိုင်းဘက်မှာ ဘုရားတွေ ဖူးရင်း၊ နေရာအနှံ့ ဆိုင်ကယ်နှင့် လျှောက်လည်ကြရင်း ချစ်သူနှစ်ယောက် စိတ်ကြည်နူးနေကြသည်။ ပြာ့ရင်ထဲမှာလည်း သူချစ်နေတာ ရဲထွဋ်ပဲ ဆိုတာ သေချာသလောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
သို့သော် မြှားနတ်မောင်ကား Facebook ထဲတွင် ကစားတာများလို့ အိပ်ရေးပျက်ကာ အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်လေသလားမသိ။ ချစ်သူနှစ်ဦး ညနေပိုင်း မန္တလေးဘက် ပြန်အလာ ညနေစာစားနေကျ ရှမ်းထမင်းဆိုင်လေးတွင် ဖြစ်၏။ ပြာပြာတစ်ယောက် Rest Room သို့ သွားနေစဉ်အချိန် ရဲထွဋ်တစ်ယောက် ပြာပြာ့အိတ်ထဲမှ mp3 player လေးကို တွေ့သွားသည်။ ပြာပြာဘာသီချင်းတွေထည့်ထားလဲ နားထောင်မယ်ဆိုပြီး Play ခလုပ်ကို နှိပ်မိသောသကာလ..
“ဘို့ကို ဘယ်လိုရအောင် လုပ်ရမလဲ ဆိုတာငါသိပြီ၊ သူ့အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းကို အသုံးချရမယ်”
ပြာတစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာသောအခါ ရဲထွဋ်ကို မတွေ့ရတော့။ အခြေအနေကို ရုတ်တရက် နားမလည်သော ပြာတစ်ယောက် သူ့ကို ထားခဲ့ပြီး ပြန်သွားသော ရဲထွဋ်ကို စိတ်တိုသွားသည်။ နောက်နေ့ ကျောင်းအရောက် ရဲထွဋ်တို့ ထိုင်နေကျ နေရာ သွားရှာတော့လည်း သီဟသစ်တို့ အဖွဲ့ကိုပဲတွေ့သည်။ သူတို့ကလည်း ပြာပြာ ရဲထွဋ်ကို မေးတာ ဘာမှပြန်မပြောပဲ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ထွက်သွားကြသည်။
ကန်တင်းမှာ တစ်ယောက်တည်း ပေါက်ကွဲနေသော ပြာတစ်ယောက်အနားသို့ မေလေး၊ မိုးခါးတို့ ရောက်လာကြသည်။
“ဟေ့ပြာ၊ ဘာတွေ စိတ်တိုနေတာလဲ”
“ဟိုကောင် ရဲထွဋ်ပေါ့၊ ကျောင်းလဲမလာဘူး၊ အဆောင်ဖုန်းဆက်တော့လည်း လာမကိုင်ဘူး”
“ငါတို့ ထင်မထားတာ တကယ်ဖြစ်လာပြီလား၊ ငါတို့ နာမည်ကြီး အလှဘုရင်မလေးကို ရဲထွဋ်က ထားသွားပြီလား”
“လုံးဝ မဟုတ်ဘူး၊ ငါသူ့ကို ဖြတ်ထားခဲ့တာဟ ”
ငါ့ကို ဘယ်သူမှ လွှမ်းမိုးတာ မခံနိုင်ဘူး၊ အခြေအနေကို ငါကပဲ ထိန်းချုပ်နိုင်စေရမယ်..
ပြာတစ်ယောက် ရဲထွဋ်ကို ဘယ်လိုလက်စားချေမလဲ
ရဲထွဋ်နဲ့ ဘို တို့ကရော ..
P.S ပန်းပွင့်တွေများတဲ့ ဘိုဘို့အတွက် ကောင်မလေးနဲ့ ပြတ်တာ သိပ်မဆန်းသမို့ အကျယ်ချဲ့မရေးတော့ပါ။
Posted by သီဟသစ် at 2:46 PM 35 comments:
ချစ်သူသိလား ရှေးရေစက်တွေ ဘယ်သူဖျက်ဖျက် မပျက်နိုင်ပေ အပိုင်း (၂)
တကယ်တော့ ပြာပြာ့ကို တိတ်တခိုး စွဲလမ်းနေတာက ရဲထွဋ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူက ကဗျာလေး စာလေးလည်း ဝါသနာ ပါသဖြင့် ကျောင်းမှာ စီနီယာတန်းက စီစဉ်ကြသော နံရံကပ်စာစောင်မှာ ပြာ့ပြာ့ကို စွဲလမ်းတဲ့ အကြောင်း ကဗျာလေး ဝင်ရေးမည် စိတ်ကူးသည်။ ကလောင်နာမည်ကတော့ သူက ရွာက လာတာဆိုတော့ ရွာသားလေး၊ ငယ်နာမည် ရဲထွန်းဦး၏ အတိုကောက် YTU - ရွာသားလေး YTU ဆိုပြီး သူ့ဘာသာသူ ဇွတ်ရွေးပစ်လိုက်၏။
ထိုကဗျာကို နံရံကပ်စာစောင်၏ အယ်ဒီတာ စာကြည့်တိုက်မှူး မခင်ဦးမေကို သွားပြ၏။
“ဟယ်ငါ့ကို ကိုမဆလာ ရည်းစားစာပေးတုန်းက ကဗျာလောက်တောင် မလှဘူးကွယ်၊ စာသားတွေကလဲ။ မီးမလာတာ ဘာဆန်းလို့လဲဟ ရဲထွဋ်ရ”
“အဲဒီနေ့က မီးမလာတာ ဆန်းတယ်ဗျ။ တစ်ပွင့် ၁၀၀ နဲ့ သူများမီးစက်က ယူထားတဲ့ မီးကြိုးကို ဖြုတ်ခိုးခံ လိုက်ရတယ်လေ။ အဲဒီညမှာ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေးကို တွေးမိတော့ အလင်းရောင်တွေ တောက်ပလာသလိုပဲဗျ။”
မာစတာတန်းမှ မမများဖြစ်သော မသက်ဝေ၊ မမိုးချိုသင်း နှင့် မသိင်္ဂီနွယ် တို့က ရဲထွဋ်ကို သနားပြီး ကူပြောပေးသဖြင့် မခင်ဦးမေ စာစောင်ထဲ ထည့်ဖို့ရာ အင်တင်တင်ဖြင့် လက်ခံထားလိုက်သည်။ ဒါတောင် ရဲထွဋ်က အထွန့်တက်သေးသည်။ သူ့ကဗျာကို ရိုမန်တစ် မဆန်မှာစိုးသဖြင့် ဟာသတွေရေးတဲ့ ကိုလူထွေး၊ တရားအကြောင်းတွေ ရေးတဲ့ ဂျူနီယာတန်းက နှင်းဟေမာတို့ စာမျက်နှာတွေနား မကပ်ပဲ အချစ်ကဗျာ လှလှရေးတဲ့ ကိုအောင်သာငယ်၊ ကိုလင်းဒီပ တို့ စာမျက်နှာ တွေနား ကပ်ထားဖို့ ပြောသေးသည်။ နံရံကပ်စာစောင် ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ နီညန်း နှင့် စမ်းချောင်းလေး တို့ကိုလည်း သူ့ကဗျာ နောက်ခံမှာ ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးကို ထည့်ဖို့ ဖားရသေးသည်။ ဟိုနှစ်ယောက်က ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီး မျက်နှာဖြင့် လက်ခံလိုက်သည်။
စာစောင်စပြီးကပ်တော့ ရဲထွဋ် ကဗျာကို ဘယ်သူမှ သံသယ သိပ်မဝင်ကြ။ ခါတိုင်း သွယ်ဝိုက်ပြီး ပဟေဠိလိုလို ဘာလိုလို ရေးတတ်သောကြောင့် ခုတစ်ခါ ဒဲ့ရေးသော အခါ ဘယ်သူမှ မရိပ်မိကြချေ။ အနီးကပ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သော ဘိုဘို တစ်ယောက်သာ သိလိုက်သည်။
နောက်နေ့ ဘိုဘို၊ ရဲထွဋ်တို့ အဖွဲ့နှင့် ပြာပြာတို့ အဖွဲ့ ဆုံကြသောအခါ ဘိုဘိုက ပြာ့ပြာကို
“ဟေ့ ပြာ၊ လာမယ့် စနေနေ့ အားလား၊ တောင်သမန်အင်းဘက်ကို သွားကြမယ်လေ”
မျှော်လင့်မထားသော စကားကို ကြားလိုက်ရသော ပြာက တအားပျော်သွားပြီး
ထိုစကားအကြား ဘိုက နောက်တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ် လုပ်နေသော ရဲထွဋ်ကို ဆွဲခေါ်လိုက်သဖြင့် ယက်ကန်ယက်ကန် ပါလာလေသည်။
“ဟေ့ကောင် ရဲထွဋ်၊ ပြာက စနေနေ့ လိုက်မယ်တဲ့ကွ၊ ဟေ့ ပြာ သူက နင့်ကို မမေးရဲလို့ဟ၊ ငါမေးပေးတာ။ စနေနေ့က ငါတို့အဖွဲ့တွေ အားလုံးသွားကြမှာပါ နင်တို့အဖွဲ့လည်း ခေါ်ခဲ့လေ”
စနေနေ့အရောက်မှာတော့ ဦးပိန်တံတားပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ကြရင်း ရဲထွဋ်နှင့် ပြာပြာ တို့ နှစ်ယောက်တည်း ကျန်အောင် ထားခဲ့ကြသည်။ စကားဘယ်လို စပြောရမှန်းမသိသော ရဲထွဋ်တစ်ယောက် တိတ်တိတ်လေး ပြာပြာ့ဘေးမှာ ထိုင်နေသည်။ ပြာပြာတစ်ယောက် ပျင်းလွန်းသဖြင့် ရဲထွဋ်စကားမပြောခင် တစ်နှစ်သုံးလေး ရေကြည့်နေသေးသည်။ ငါး အရောက်မှာ.. ရဲထွဋ်က..
“ဟိုဟာလေ၊ နာမည်ကြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ရဲ့ သမီးဖြစ်ရတာဘယ်လိုနေလဲ”
“ငါ့အဖေက စီးပွားရေး လောဘကြီးသလောက် ပညာရေးဘက်မှာလည်း လောဘကြီးတယ်ဟ၊ ငါ့ကို သူလို ဖြစ်စေချင်တယ်၊ ပညာတတ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ပေါ့ဟာ၊ ငါက စိတ်မဝင်စားဘူး။ ထားလိုက်ပါဟာ၊ နင်နဲ့ဘိုဘို နဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြဟာ”
“ငါတို့လား၊ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ခင်တာ၊ ညီအစ်ကိုရင်းတွေ ထက်ပိုချစ်တယ်ဟ”
အဲဒီနေ့က အိမ်အပြန်မှာတော့ ပြာ တစ်ယောက် mp3 player လေးကို Recording နှိပ်ရင်း
ရဲထွဋ်တစ်ယောက်မှာတော့ ချစ်ရုံသာချစ်တတ်ပြီး ဖွင့်မပြောတတ်သဖြင့် ဒုက္ခရောက်နေသည်။ သူငယ်ချင်း အရင်းတွေ ကိုလည်း တိုင်ပင်ရမှာ နည်းနည်းရှက်သလို ရှိသည်။
ဒါနဲ့ စီနီယာတန်းက အကိုကြီး ကိုZT ကို သွားမေးသည်။ ကိုZT က
“အေး မင်းရည်းစားစာ ရေးပြီး ပေးမယ် ဆိုရင် Unicode standard အတိုင်းရေးကွာ၊ ကျန်တာတွေတော့ ငါမသိဘူး”
ပြောလိုက်သဖြင့် စိတ်လေရတာက တစ်ဖုံ၊
“ညည်းကို ကောင်လေးတွေက ဘယ်လို propose လုပ်လဲ မှတ်မိလား” သွားမေးသေးသည်။ ဟိုက “သမီးတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ ထွက်ထွက်ပြေးလာတာ ဘာပြောကြမှန်း မမှတ်မိပေါင်” ဆိုတော့ အားကိုးလို့မရပြန်။
ရည်းစားရှိတဲ့ အငယ်မ နောင့်နောင့်ကျတော့ရော
“သမီးလား၊ သမီးကို ဘာပြောမှန်းတော့ သေချာမသိဘူး၊ ယောင်ပြီးတော့ ခေါင်းညိတ်လိုက်တာ” လို့ပြန်ပြောတော့
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုယ် ပြန်ကပ်ရတော့သည်။
“လွယ်လွယ်လေးရယ်၊ ရဲထွဋ်ရာ၊ မင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးတယ်မို့လား၊ ရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသားတွေ မင်းသမီးကို ရည်းစားစကားပြောသလို ပြောလိုက်ပြီးတာပဲ..”
ဆိုပြီး ပိုးနည်းတွေ ပြောပြသည်။ ရဲထွဋ်က
“ပိုးဟပ်ရာ၊ မင်းနည်းတွေသာ တကယ်စွံရင် မင်းပိုးဟပ် ဆိုတဲ့ နာမည်ရမှာတောင် မဟုတ်ဘူး”
“မဟုတ်သေးဘူး၊ ရဲထွဋ်ရ၊ ဒီကောင်မစွံပေမယ့် သူပြောတဲ့ စကားတွေမှာ လိုရင်းရှိတယ်။ မင်း ပြာ့ကို ချစ်ရင် ချစ်တဲ့ အကြောင်း သူသိအောင်ပြရမယ်”
ဒီလိုနဲ့ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ် Excursion ဆိုပြီး ထွက်ကြတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ခရီးမှာ ရဲထွဋ် တစ်ယောက် လှုပ်ရှားစေဖို့ ဝိုင်းသင်ပေးကြသည်။
“မင်းဘာမှ မကြောက်နဲ့ ရဲထွဋ်၊ လုပ်ရမှာက လွယ်လွယ်လေး၊ နှင်းဆီပန်းစီးရယ်၊ ချောကလက်ရယ်၊ မင်းပြောရမှာက
ပြင်ဦးလွင် ကန်တော်ကြီး ဥယျာဉ်ထဲမှာ ..
ဂိမ်းတွေ ကစားပြီးကြ၍ တစ်ဖွဲ့တစ်နေရာစီ နားနေကြသော အချိန်၊ မေလေး၊ မိုးခါး၊ မေသူ စသော ပြာပြာ၏ သူငယ်ချင်းများ သစ်ခွဥယျာဉ်ဘက်သွားကြည့်ချိန်..၊ အဲဒီအချိန်ထက်ကောင်းတာ ရဲထွဋ်အတွက် မရှိ..။ ရဲထွဋ်တစ်ယောက် တွန့်ဆုတ် တွန့်ဆုတ်ဖြင့် ပြာ နားကို ရောက်သွား၏။ ရဲထွဋ်ကို မြင်လိုက်ရချိန်ခဏ ပြာ၏ အတွေးများကရော..
ဟင်သူ့ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ငါကမ္ဘာကြီး ရပ်တန့်သွားသလိုပါပဲလား၊ အဲလို ခံစားမှုမျိုးက ငါ ဘိုဘို့အတွက် ထားထားတာပါ
ပြာပြာနားရောက်ချိန်ခဏ ရဲထွဋ်တော့ ပြာနေပြီ..
ဟိုလေ၊ ဟိုဟာ၊ ဟောဒီမှာ နှင်းဆီပန်းဟာ၊ ချောကလက်ဟာ..၊ အဲဒါနင့်ဖို့..၊ ပြီးတော့ အင်း
ရဲထွဋ် ဆက်ပြောဖို့ သတ္တိမရှိတော့။ သီဟသစ်တို့ အဖွဲ့ဘက် ပြန်ကြည့်သည်။ တစ်ဖွဲ့လုံးက ဆက်ပြော၊ ဆက်ပြော ဆိုပြီး အချက်ပြကြလေသည်။
“အင်း ပါဆို၊ နင်ငါ့ကို ချစ်တယ် လို့ ပြောပြီး အဖြေတောင်းမလို့ မို့လား ငါ့အဖြေက အင်း၊ နင်ဟာ ငါ့ရည်းစားဖြစ်သွားပြီ”
ထိုနေ့က ကန်တော်ကြီးထဲမှာ ကျွမ်းထိုးတော့မတတ် ပျော်နေသော ရဲထွဋ်ကို ပြာ့ဘေးမှာ တွေ့နိုင်ပါသည်။
ရည်းစားနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့ဘို၊ ငါချစ်တာ ဘယ်သူလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ် မေးနေမိတဲ့ပြာ...
P.S ဇာတ်လမ်းက ဘယ်သူရဲ့ တကယ် အဖြစ်အပျက်မှ မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရေးထားတာပါ။ ပျော်စေချင်လို့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ နာမည်ထည့်ထားတာပါ။
Posted by သီဟသစ် at 1:21 AM 45 comments:
ချစ်သူသိလား ရှေးရေစက်တွေ ဘယ်သူဖျက်ဖျက် မပျက်နိုင်ပေ အပိုင်း (၁)
၆ တန်း စာသင်ခန်း
စာသင်နှစ်အသစ်စတာ သိပ်မကြာသေးချိန်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းတက်ခါစ ဆရာမ မလာသေးသမို့ ထုံးစံအတိုင်း အနည်းငယ် ဆူညံနေသည်။ ဂျစ်ကန်ကန်ကောင်လေး တစ်ယောက် လောလော လောလောနဲ့ ရောက်လာပြီး မျက်မှန်နဲ့ စာဂျပိုးပုံ ပေါက်သော ကောင်လေး ဘေးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ဆရာမ အတန်းထဲသို့ ဝင်လာသည်။
“မနေ့က ကျက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်း ဘယ်သူ ပြန်ပြောနိုင်မလဲ”
ကျောင်းသားများ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ဝိုင်းဖြေကြသည်။
“ကဲကဲ ဘိုဘို၊ ထစမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်က တို့ဗမာ အစည်းအရုံးကို ဘယ်ခုနှစ်မှာ စဝင်ခဲ့သလဲ”
ဂျစ်ကန်ကန်ပုံစံနှင့် ဘိုဘိုတစ်ယောက် ထဖြေသည်။
ဘေးက စာဂျပိုးလေး ရဲထွဋ်ဦး မနေနိုင်တော့။ တိုးတိုးလေးထောက်ပေးသည်။
ဘိုဘိုတစ်ယောက် ဆရာကြီး စတိုင်လ်ဖြင့် ဆရာမကို ပြန်ဖြေသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်က တို့ဗမာ အစည်းအရုံးကို ၁၉၃၈ အောက်တိုဘာမှာ စဝင်ခဲ့ပါတယ် ဆရာမ”
“အမယ်၊ စာထောက်ပေးတဲ့ကောင် ရဲထွဋ်ဦး၊ ဖြေတဲ့ကောင် ဘိုဘို နှစ်ကောင်လုံး အခန်းရှေ့ထွက် ထိုင်ထလုပ်ကြစမ်း”
ထမင်းစားကျောင်းဆင်းချိန်မှာတော့ ကျောင်းသား နှစ်ယောက်သား ရင်းနှီးမှုရသွားကြသည်။
“ရွာသားလေးပေါ့၊ ငါက မိုးကုတ်က ပြောင်းလာတာကွ”
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က ဝါသနာလည်းတူသည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် စက်ဘီးကိုယ်စီဖြင့် ရေတံခွန်တောင်ဘက်သွားကြသည်။ လမ်းဘေးက လယ်ကွင်းတွေနားမှာ စွန်တွေလွှတ်ကြသည်။
ဒီလိုနဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်အတူတူ ၁၀ တန်းအောင်ပြီး မန္တလေးကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်သို့ တက်ကြသည်။ ကျောင်းမှာက သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ ထပ်ရကြသည်။ ခပ်တည်တည် မနေတတ်သော သီဟသစ်၊ ကိုကိုကြီး(ခ)ပုလုလွေး၊ ပိုးဟပ်လေး ဖိုးသင်္ကြန်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ ကျောင်းသားဘဝလေးက ပုံမှန်အတိုင်း အေးအေးဆေးဆေးလေး ပြီးသွားမယ်လို့ ထင်ရသည်။
အဲဒီတစ်နေ့မှာ မန္တလေးကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်ကို ကျောင်းသူ အသစ်တစ်ယောက်ရောက်လာသည်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ မထူးခြားလှပေမယ့် ပြောင်းလာတာက ကော်ဖီခြံပိုင်ရှင်၊ နာမည်ကြီး Instant Coffee လုပ်ငန်းများ ပိုင်ရှင် သူဌေးကြီး၏ သမီး အလှပဂေးလေး ကောင်းကင်ပြာဖြစ်နေတာကတော့ ထူးခြားသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ကောင်းကင်ပြာ နှင့် သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသော မေလေး၊ မိုးခါးတို့ ကင်တင်းမှ ပြန်အလာ လမ်းတွင် ဗလ အားကိုးနှင့် ကျောင်းမှာမိုက်ကယ်လုပ်နေသော ဆောင်းချမ်းမိုးတို့ အဖွဲ့ တွေ့ကြသည်။
"ဟေ့ပြာ၊ တို့နာမည် ဆောင်းပါ၊ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်”
ကမ်းပေးသောလက်ကို ပြန်မနှုတ်ဆက်ပဲ ပြာပြာက
“တို့လည်းတွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်၊ ကျောင်းတက်ချိန်နီးပြီ၊ သွားတော့မယ်”
မိုက်ကယ်ဆောင်းက တဆင့်တက်ဖို့ ကြိုးစားသည်။ ပြာပြာ့မေးလေးကို မထိတစ်ထိ လှမ်းကိုင်ပြီး
ကောင်းကင်ပြာ သည်းမခံနိုင်တော့။ မိုက်ကယ်ဆောင်းကို ပါးရိုက်လိုက်သည်။ အဲဒီမြင်ကွင်းကို မကျေမနပ် ကြည့်နေတာက ရဲထွဋ်ဦးတို့ အဖွဲ့။ မိုက်ကယ်ဆောင်းက ပြာပြာကို လက်တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် လှမ်းဆွဲဖို့ ကြိုးစားချိန်မှာတော့ ရဲထွဋ်ဦးတစ်ယောက်ဘာမှ မမြင်တော့၊ မိုက်ကယ်ဆောင်းကို လှမ်းထိုးသည်။ မိုက်ကယ်ဆောင်း၏ သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော တောင်ကုန်းတစ်ဖြစ်လဲ လူပျိုကြီး၊ ကိုရင်ဒဘ တို့ကလည်း ပြန်ထိုးကြသည်။
အဲဒီမှာ ဘိုဘို၊ သီဟသစ်တို့ သူငယ်ချင်းများ အဖွဲ့ ဝင်လာပြီး အပြန်အလှန် ချဲကြတော့သည်။ ဗွီဒီယိုထဲမှာလို မဟုတ်တော့ ရဲထွဋ်တို့ အဖွဲ့ မှောက်ကျန်ခဲ့သည်။ ဆရာတွေ ထွက်လာခါမှ မိုက်ကယ်ဆောင်းတို့ အဖွဲ့ ထွက်ပြေးသွားတော့သည်။ ပြာပြာ စစချင်းပြေးထူတာက ဘိုဘို့ကို ဖြစ်သည်။
“ဘယ်နားထိသွားလဲ၊ နာသွားလားဟင်၊ တို့နာမည်ပြာပါ”
“နည်းနည်းပါးပါးပါ၊ တို့နာမည် ဘိုပါ”
ပြာပြာ့ကို သတိလက်လွတ်ငေးနေမိတာကတော့ ရဲထွဋ်ဖြစ်သည်။
ရန်ပွဲက အပြန် အဆောင်ခန်းထဲတွင်မတော့ သီဟသစ်က
“ရဲထွဋ်ကွာ၊ လူနောက်ပဲ၊ သူလုပ်တာနဲ့၊ တို့တော့ အီသွားပြီ”
“ဟာ၊ ကောင်မလေးက အနှောင့်အယှက်ခံနေရတာ ကူညီမှ ရမှာပေါ့ဟ၊ ငါဘာမှားသလဲ”
“မင်းကွာ၊ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ပြောင်းလာတဲ့ ကောင်မလေးကို၊ တော်ကြာ တို့ကို မကောင်းကြံမယ့်သူဆို ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲ”
“မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ၊ ပြာ့ပုံစံက အဲလိုမဟုတ်ပါဘူးကွ”
“ပြာ၊ နင်သိပ်လှတာပဲဟယ်၊ နင့်ကြောင့် ဟိုကောင်တွေ ရန်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်”
“အေးဟ ငါလှတာတော့ ငါသိပါတယ်၊ ရန်ဖြစ်ကုန်ကြတာတော့ မတတ်နိုင်ဘူးဟယ်။ ငါသူ့ကို ကြုံရင် နောက်တစ်ခေါက်တွေ့ချင်သေးတယ်။ ငါ့အိပ်မက်ထဲက မင်းသားလေးကို ငါတွေ့ပြီ”
“ပြာ၊ နင်သွား မလုပ်နဲ့ ၊ ဘို့မှာ ပန်းပွင့်တွေ အများကြီးဟ၊ ပြီးတော့ သူ့မှာလည်း ရည်းစားရှိတယ်၊ တခြားလူ စဉ်းစားပါဟာ”
“အို..ယူသိထားဖို့က ပြာလိုချင်ရင် ပြာရရမယ်၊ ပြာမရရင် ပြာဖြစ်သွားမယ်”
မေလေးနှင့် မိုးခါးတို့ နှစ်ယောက်သား ပခုံးတွန့်ကြရုံကလွဲပြီး ဘာမှဆက်ပြောစရာ မရှိတော့။ ပြာပြာက ကျောပိုးအိတ်ထဲမှ mp3 player လေးကိုထုတ် Recording ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး
“ချစ်စရာနေ့လေးတစ်နေ့၊ ငါ့အိပ်မက်ထဲက မင်းသားလေးကို တွေ့ပြီ၊ သူ့အချစ်ကို ရဖို့ ကြိုးစားတော့မည်”
၁)စစချင်း ကြိုးစားရေးမိသော ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဇာတ်လမ်းရှည်ပါမည်။ လိုနေတဲ့ အချက်တွေရှိရင် အားမနာပဲ ဝေဖန်ထောက်ပြပေးကြပါရန်။
၂)ညီအစ်ကို မောင်နှမများ နာမည်ကို ခွင့်မတောင်းပဲယူသုံးထားပါသည်။ ဇာတ်ကောင်တွေ များသမို့ နောက်လူတွေလည်း ပါလာမည်။ မကျေနပ်ရင် မုန့်ကျွေးနိုင်ပါသည်။
Posted by သီဟသစ် at 11:34 PM 41 comments:
ဘလော့ညီအစ်ကို မောင်နှမ သူငယ်ချင်းများနှင့် မတွေ့ရသည်မှာ ကြာလေပြီ။ ဘလော့ရေးခြင်း၏ အလယ်အဆင့်ဟုပြောကြသော ဘလော့ကို ခေတ္တစိတ်ကုန်တဲ့ အဆင့်ရောက်သွားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ခုပြန်လာပြီ ပြန်ချစ်မည်။ အရင်ရက်တွေက ဘယ်သူ့ဆီမှာမှ စာလိုက်မဖတ်ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ဖတ်ပါမည်။ သီဟသစ်ကို မေ့မသွားကြသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ (မေ့မသွားဘူး ဟု ဘယ်သူမှ မပြောပါ။ ကိုယ့်ဘာသာကို ဇွတ်ထင်တာဖြစ်ပါသည်။) ခုပို့စ်မှာတော့ draft ထဲမှာ ကြာကြာပစ်ထားခဲ့မိသော လန်ကာဝီနောက်ဆုံးပို့စ် ကိုတင်ပါမည်။)
လန်ကာဝီရဲ့ နောက်ဆုံးလည်ဖြစ်တဲ့ ရက်က ခရီးစဉ်ကတော့ Mangrove and Eagle Feeding ဆိုတဲ့ လမုတောတွေ သွားကြည့်တဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ လင်းယုန်ငှက်တွေ အစာကျွေးတဲ့နေရာပါ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို ပုသိမ်ချောင်းသာကလွဲရင် တခြားနေရာ မရောက်ဖူးတော့ မြန်မာပြည်က လမုတော ကိုမမြင်ဖူးပါဘူး။ သွားဖြစ်တဲ့ အဖော်တွေနဲ့တောင် ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရား ရင်ပြင်တော်သွားဖို့ Cable Car တွေဆောက်၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Mangrove Tour လှည့် စိတ်ကူးတွေယဉ်နေပါသေးတယ်။
(♥ Mangroves@Kukup Island - by Ko TZA , လမုပွင့် - မမသီရီ)
ပုံထဲကလို တမျှော်တခေါ် လမုတောတွေ ကြားပတ်မောင်းပြပါတယ်။ အချို့နေရာတွေမှာ မျောက်ကလေးတွေကို တွေ့တော့ စက်လှေရပ်ပြီးပြပါတယ်။ If you are lucky, blah blah blah.. ဆိုတဲ့ စက်လှေ သမားရဲ့ စကားသံကို မရိုးနိုင်အောင် စကြားရတာပေါ့။ မျောက်တွေက အစာကို ရေထဲက လှမ်းယူရင် ဘယ်လိုဆန်းတယ်ဆိုလားပဲ။ ဟိုမျောက်တွေကတော့ ဣနြေ္ဒရနေလိုက်တာ။ လှုပ်တောင်မလှုပ်။
နောက်နေရာကတော့ လန်ကာဝီရဲ့ သင်္ကေတ လင်းယုန်တွေ ရှိတဲ့နေရာပါ။ စက်လှေသမားက ကြက်အရေခွံတွေကို ပုံးထဲက နည်းနည်းထုတ်ပြီး ရေထဲချကျွေးလိုက်ပါတယ်။ လင်းယုန်တွေကလည်း အဲဒီအစာတွေ ရှိနေတဲ့ ခဏပဲ ပျံဝဲလာကြတာပါ။ နောင်အခါသွားချင်တဲ့သူတွေ လင်းယုန်တွေ အကြာကြီး ကြည့်ချင်ရင် အစာကျွေးဖို့ တစ်ခုခုယူသွားကြဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
နောက်တစ်နေရာ တောင်အောက်ထဲကို ဖြတ်ရတဲ့ ရေလမ်းလေးပါ။ အထဲကိုဝင် စက်လှေကို ဖြေးဖြေးချင်းပြန်လှည့်ပြီး တခြားတစ်ဖက်ကို ပြန်ထွက်တာပါ။
နောက်တစ်နေရာကတော့ လင်းနို့ဂူပါ။ သီဟသစ် ချစ်တဲ့အထဲမှာ မြန်မာပြည်ကပုဇွန်ပဲပါတာ။ လင်းနို့မပါလို့ အထဲဝင်မကြည့်ခဲ့ပါဘူး။ အောက်ကပုံလေးက လင်းနို့ဂူထဲကို အဝင်လမ်းပါ။
နောက်ဆက်သွားတဲ့နေရာကတော့ Gua Certia (Cave of Legends) ဆိုတဲ့နေရာလေးပါ။ သိမ်းငှက်အကြီးကြီးက တရုတ်မင်းသမီးလေးကို ချီပြီး အဲဒီနေရာမှာထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဂူထဲမှာတော့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမရှိပေမယ့် ဂူအပြင်ဘက်က လမ်းကလေးကတော့ ကဗျာတော်တော်ဆန်ပါတယ်။ နှင်းဆီဖြူလေးနဲ့ အတူတူ လျှောက်ရရင်ပေါ့လေ။ ခုတော့ မောင်villager တို့နဲ့ဆိုတော့ စကားပြေလောက်ပဲ ဆန်ခဲ့တယ်။
လင်းနို့ဂူပြန်အထွက်မှာတော့ သမုဒ္ဒရာဘက်ကို သွားတာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို သွားတဲ့ရေလမ်းဘက်ပါ။ လှိုင်းတွေက တော်တော်ကြီးပါတယ်။ သီဟသစ်အတွက် ပြောတာပါ။ Kilim Geoforest Park ဆိုပြီး စာတမ်းထိုးထားတဲ့နေရာလေးကိုလည်း ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
နေ့လည်စာ စားတာက ရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်လေးမှာပါ။ လန်ကာဝီမှာ စားခဲ့သမျှဆိုင်တွေထဲမှာ အတန်ဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ စားရတာလဲ မဆိုးပါဘူး။ ၇ ယောက်ကို 120 ကျော်ပဲ ကျပါတယ်။
လန်ကာဝီမြို့ထဲကို ဖြတ်တော့ တစ်ချို့နေရာတွေက ပြင်ဦးလွင်တို့၊ မြစ်ကြီးနားတို့က အိမ်မျိုးလေးတွေလိုပါပဲ။ W ကား တွေ မဖမ်းခင်ကပုံနဲ့တူတယ်ဆို ပိုမှန်မယ်။ အိမ်တိုင်းမှာ ကားကောင်းကောင်းလေးတွေ တစ်စင်းစီလောက်စီ ရပ်ထားကြလို့ပါ။
နေ့လည်ပိုင်းကတော့ Mahsuri မင်းသမီးလေးရဲ့ ပြတိုက်ကိုသွားတာပါ။ ပြတိုက်မှာက ပန်းချီတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတာပါ။ DVD နဲ့လည်းသူတို့ ဇာတ်လမ်းရိုက်ထားတာကို ပြန်ပြပါတယ်။ ပြတိုက်က ဝန်ထမ်းမိန်းကလေးတွေကတော့ ရွာကလိုပါပဲ။ စာအုပ်လေးတွေ ကိုယ်စီဖတ်လို့ လာတဲ့သူတွေကိုလည်း သိပ်ဂရုစိုက်မနေပါဘူး။
ညပိုင်းမှာတော့ စင်ကာပူက ဘလော့ရေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ဆိုပြီး ချောကလက်သွားဝယ်ပါတယ်။ ဘူးအလတ်စားလောက်ကို 20 ပေးရပါတယ်။ သို့ပါသော်လည်း ကျွေးလို့မရတော့ပါဘူး။ မင်းသမီးကြီးနဲ့ အတူ ပျောက်ဆုံးသွားလို့ပါ။
၁) လန်ကာဝီက Duty Free ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်လို့ အပြန် စလုံးက Duty Free ဆိုင်မှာ ဝယ်ခွင့်မရှိပါ။
၂) လန်ကာဝီရောက်ရင် သွားမယ့် ခရီးစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးဆစ်ပါ
၃) ကမ်းခြေတွေမှာ ရေဆော့ချင်ရင် ညနေပိုင်းတွေမှ ပိုကောင်းပါတယ်
၄) စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ နီးတဲ့ဟိုတယ်တွေမှာတည်းရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ သီဟသစ်တို့တုန်းက ညစာစားဖို့ ကားသက်သက်ငှားနေရလို့ပါ။
၁) စာလာဖတ်ပေးတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အားလုံး
၂) ဓါတ်ပုံတွေ အများစုကို ရိုက်ထားပေးတဲ့ ကိုလင်း၊ Mr. Villager
P.S Bonus တွေ နောက်ပို့စ်မှာလာမည်။
Posted by သီဟသစ် at 12:58 AM 22 comments:
ညီလေး ဆောင်းဆောင်းက ဘလော့ကနေ တဂ်၊ မမပြာပြာက Facebook ကနေ တဂ်လုပ်လို့ ရေးလိုက်တာပါ။
1. What is your name : သီဟသစ်
2. A four Letter Word : သိသလိုလို
3. A boy's Name : သန့်
4. A girl's Name : သက်မွန်မြင့်
5. An occupation : သံဗျင်ကြီး (ရှင်ကျာပူ ဘလော့ရပ်ဝန်း)
6. A color : သစ်စေးရောင်
7. Something you'll wear : သားရေဂျာကင်
8. A food : သရက်သီး
9. Something found in the bathroom : သွားပွတ်တံ
10. A place : သီရိပစ္စယာ ဟိုတယ်
11. A reason for being late : သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုးလေး လာနေရလို့ပါ (ကိုယ်က ဆယ်လီဗြစ်တီ ဆိုတော့ သိတယ် မဟုတ်လား)
12. Something you'd shout : သွားစမ်းပါ မာယာတွေ ရိုးနေပြီကွာ
13. A movie title : သံသရာ စက်ဝန်းတစ်နေရာရာ
14. Something you drink : သစ်ခွ
15. A musical group : သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ်တွေ (The Wild Ones)
16. An animal : သိမ်းငှက်
17. A street name : သစ္စာလမ်း
18. A type of car : သန်ဒါဘတ်ဒ် ( ThunderBird from Ford )
19. The title ofasong : သံယောဇဉ် (လေးဖြူ)၊ သံသရာစမ်းရေ (ဇော်ဝင်းထွဋ်)
20. A verb : သောက်(အသီးဖျော်ရည် ပါကွယ်)
P.S ခုရက်ပိုင်း စာရေးချင်စိတ်၊ စာဖတ်ချင်စိတ်များ PPSS ပျောက်ဆုံးနေသောကြောင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေရဲ့ ဘလော့တွေကို လိုက်မလည်စာမဖတ်ဖြစ်တာ ခွင့်လွှတ်ကြပါရန်
၁) အာဒံနဲ့ ဧဝ
မေးခွန်း အာဒံနဲ့ ဧဝ ကို တရုတ်လူမျိုးလို့ ဘာကြောင့်ထင်လဲ
အဖြေ စေတန်နတ်ဆိုးက မြွေယောင်ဖန်ဆင်းပြီးလာတယ်။ တားမြစ်ထားတဲ့ အသီးကို စားဖို့ ဖျားယောင်းတယ်။ ဧဝ က အာဒံကို ပြောလိုက်တယ်။ မြန်မြန်လုပ် အာဒံ၊ မြွေကိုပါဖမ်းလိုက်၊ မြွေကိုလည်း စားလို့ရတယ်လေ
မေးခွန်း အာဒံနဲ့ ဧဝ ကိုမလေးလူမျိုး လို့ ဘာကြောင့်ထင်လဲ
အဖြေ စေတန်နတ်ဆိုးက မြွေယောင်ဖန်ဆင်းပြီးလာတယ်။ တားမြစ်ထားတဲ့ အသီးကို စားဖို့ ဖျားယောင်းတယ်။ အာဒံရော ဧဝရောက ပြန်ပြောတယ် “အေးဆေးပေါ့၊ နက်ဖြန်မှ စားလည်းရတာပဲ”
မေးခွန်း အာဒံနဲ့ ဧဝ ကုအိန္ဒိယလူမျိုး လို့ ဘာကြောင့်ထင်လဲ
သူတို့က မြွေကို သစ်သီးစားအောင် လုပ်ပစ်လိုက်လို့ပေါ့
တရားသူကြီး : ဟေ့အားပန် မင်းခုဒီနေရာကို ရောက်တာ သုံးခေါက်ရှိပြီ။ မင်းမရှက်ဘူးလား
အားပန် : ဟုတ်၊ ဒါပေမယ့် လူကြီးမင်းကျတော့ နေ့တိုင်း ဒီကိုရောက်နေတာကော
၃) ကာရာအိုကေ သွားဆိုတဲ့ အားပန်
အားပန်နဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စု ကာရာအိုကေ ဆိုရန် သွားကြသည်။ အားပန်က ဒီဂျေကို Ah Cheng Buey Ro Ti (အားချွန် ပလာတာ ဝယ်သည်) သီချင်းကို ဖွင့်ပေးရန်ပြောသည်။
DJ က သူတို့ဆိုင်တွင် တရုတ်သီချင်း မရှိ၊ အင်္ဂလိပ်သီချင်းသာ ရွေးပေးရန်ပြော၏
အားပန်တစ်ယောက် ဒေါသတကြီးပေါက်ကွဲပြီး မန်နေဂျာနဲ့ သွားတိုင်သည်။ တစ်နာရီခန့် ငြင်းခုန်ပြီးခါမှ အားပန်လိုချင်သော သီချင်းကို သိရသည်။ “Unchained Melody”တဲ့။
Posted by သီဟသစ် at 1:32 PM 25 comments: